Quincy Media dia mametraka ny Mediaproxy LogServer ho ampahany amin'ny fanarahan-dalàna sy rafi-tsarimihetsika manaraka - NAB Show News nataon'i Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Raiso 1 manendry manam-pahaizana momba ny indostria, Stephen Stewart, ho COO.
Magewell mankany Premiere Ultra-Compact, 12G-SDI M.2 Capture Card ao amin'ny ISE 2020
Home » News » Quincy Media dia mametraka ny Mediaproxy LogServer amin'ny maha-fanarahan-dalàna sy rafi-tsarimihetsika manaraka
Quincy Media dia mametraka ny Mediaproxy LogServer amin'ny maha-fanarahan-dalàna sy rafi-tsarimihetsika manaraka
Melbourne, Australia - 14 Aogositra 2019 - Mediaproxy, ny lehiben'ny mpanome vahaolana an-dàlana IP mifototra amin'ny rindrambaiko, dia manambara fa ny Quincy Media dia ny fametrahana ny logS pagsunod ny logging ary ny fanaraha-maso amin'ny serivisy fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso lehibe amin'ny asa fanaraha-maso sy ny fanarahan-dalàna.
Miorina ao amin'ny tanànan'i Quincy ao Quincy Media i Quincy, izay niorenany tamin'ny faran'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo amin'ny maha mpanonta gazety an-toerana azy. Quincy Newspapers Inc (QNI) dia nifindra tao amin'ny tsenan'ny fampielezam-peo tamin'ny 1947 rehefa nanokatra ny onjam-peo FM voalohany ara-barotra Quincy. Nandritra ny 1970s QNI dia nitombo tamin'ny fividianana fantsom-pahitalavitra ary nanohy nanangana ny portfolio-ny tamin'ny taonjato 21st. Quincy Media, rehefa tonga tao 2016 ny QNI dia manana onjam-peo any Arizona, Missouri, Indiana, Indiana, Iowa, Minnesota, New York, Virginia sy Wisconsin, ary koa gazety roa sy serivisy radio roa.
Ny teknolojia Mediaproxy dia hapetraka ao amin'ny foibem-pahitalavitra Quincy Media rehetra ary hampiasaina hanoratana sy hanara-maso ny serivisy an-tserasera 138 ankoatra ny renirano OTT. Ny fantsom-pifandraisana dia nividy LogServer TSoIP (Transport Stream over IP), OTT Logging and Monitoring and TS Monitoring / Analysis system, izay apetraka sy tohanan'ireo mpiara-miasa ara-teknika fototra, NFB Consulting.
Raha naneho hevitra momba ny fanapahan-kevitra hamatsy vola any Mediaproxy, Brendan Ford, talen'ny fahaizan'ny efitrano fifehezana Quincy Media, dia nilaza fa: "Ny fankatoavana sy ny fanamafisana ny famoahana dia tena zava-dehibe ho an'ny onjam-pahitalavitra ary mitady teknolojia mandroso isika izay hanome fahombiazana sy feno , ary mora ampiasaina fomba fisavana ny marika rehetra avy amin'ny interface iray. Taorian'ny vanim-potoana fanombanana lehibe dia niara-niasa tamin'ny Mediaproxy ho an'ny fanarahana ny fanarahana 24 / 7 ny fanarahana sy ny fanaraha-maso manerana ny onja Quincy izahay. Manantena izahay fa hiara-miasa amin'ny Mediapoxy izao sy amin'ny ho avy. ”
Ny filoha lefitry ny vahaolana an'ny Mediaproxy any Etazonia, Mark Rushton, dia nanampy hoe: "Quincy Media dia nanangana tambajotra mahavariana an'ireo onjam-pahitalavitra any Etazonia ary nitady ny fomba tsara indrindra hanarahana ny fenitra amin'ny fampielezam-baovao sy hiantohana ny famokarana avo lenta. Faly izahay mandray azy io ho mpampiasa vaovao an'i LogServer ary manantena fa io no hanombohana fifandraisana maharitra sy mahavariana. ”
Quincy Media, Inc., antsoina hoe Quincy Newspapers, Inc., dia orinasa fampahalalam-baovaon'ny fianakaviana izay manana sy mitantana ny onjam-peo amin'ny tsenan'ny 16, ireo gazety amin'ny tsena roa, radio amin'ny sehatra iray sy nomerika amin'ny rehetra. Ny dian-tongotra ataonay dia mitatitra ny ankamaroan'ny Midwest ambony - manana fananana roa na mihoatra any Illinois, Iowa, Minnesota ary Wisconsin izahay. Ny QMI dia miasa koa amin'ny onjam-pahitalavitra any Tucson, Arizona, Fort Wayne, Indiana, Bluefield, West Virginia ary Binghamton, New York. Ny fifandraisanay amin'ny tambajotra amin'ny fahitalavitra dia ABC, NBC, CBS sy FOX. QMI dia manana sy miasa koa ny Herald-Whig any Quincy, Illinois ary ny Courier - Post any Hannibal, Missouri.
Ho fampahalalana bebe kokoa, tsidiho azafady quincymediacareers.com
Hatramin'ny 2001, injeniera an-jatony manerana an'izao tontolo izao, dia miankina isan'andro amin'ny vahaolana rindrambaiko miavaka nataon'i Mediaproxy amin'ny fanaraha-maso 24 / 7, fanadihadiana, multiviewing ary fisamborana horonantsary mivantana avy amin'ny radio sy OTT. Amin'ny fanohanana ireo endrika sy fitsipika farany indrindra anisan'izany 4K, HEVC, SMPTE 2022-6, SMPET 2110, NDI, HLS, MPEG-DASH, ary DVB-2, dia manamafy ny fanadihadiana momba ny zava-mitranga any an-habakabaka, ny fikarohana sy ny fanamarinana an-tserasera amin'ny alalan'ny fampiasana mora ampiasaina amin'ny tranonkala sy ny serasera. Mifanaraka amin'ny fepetra fampielezam-peo sy fepetra mivantana amin'izao fotoana izao, i Mediaproxy dia manohana ny fenitra rehetra misy ankehitriny mihidy captioning, DVB Subtitling, SCTE-35, SCTE-104 ary feo. Na eny an-tany na any anaty rahona, ny fanaraha-maso an-dalambe, ny fikarohana sy ny fanaraha-maso dia azo tanterahana amin'ny toerana iray.
Ho fampahalalana bebe kokoa, tsidiho azafady www.mediaproxy.com
Fifandraisana amin'ny mpanao gazety:
Pejy Melia PR
Miaraka amin'ny vondron'olona traikefa efa ho 40 taona izay miasa amin'ny Fifandraisana eo amin'ny sehatry ny Public, ny Page Melia PR dia tsy sampana hafa an'ny PR.
Eto, ny ekipa natokana ho antsika, fanentanana ary mahaliana dia te-hijery ireo zavatra samihafa mba hahazoana antoka fa ny feon'ireo mpanjifantsika dia henoina. Manavao ny fomba ifampizarana ny hafatrao izahay.
Amin'ny alalàn'ny fampihetseham-pandrefesana Content Marketing sy ny tetikasan'ny PR dia mandao ny 'PR miteny' tsy misy ilàna azy izahay ary mamoaka mivantana ny fonosan'ireo olana, mifantoka amin'ny fanentanana lahatsoratra ho amin'ny fanamafisana hevitra, fanadihadiana sy lahatsoratra bilaogy.
Tsy vitan'ny hoe miara-miasa amin'ireo mpitarika, mpanamory sy mpanapa-kevitra isika mba hanasongadinana ireo olana manakatsakana sy hanova ny indostriantsika, manana fifandraisana matotra amin'ny mpanao gazety, ny tonian-dahatsoratra sy ny famoahana ihany koa isika mba hamoronana ny votoaty kasaina hiresahana - ary ireo mpamaky dia te-hamaky.
Lahatsoratra farany an'i Page Melia PR (jereo rehetra)
Ny ho avy dia video: Ny IPV dia miantoka ny fampiasam-bola £ 4m hanafaingana ny fitomboana manerantany - Desambra 5, 2019
Nanokatra ny Stream + i Boston Limited, vahaolana iray azo antoka ho an'ny fampidinana horonan-tsary mivantana misy haingam-pandeha lehibe - Novambra 12, 2019
Miara-miasa amin'ny Imperial College London, ny Three Media dia nampihatra ny fanamboarana sehatra tena “akaiky” tao anatin'ny vokatra XEN: Pipeline; fiarovana ny fanarahana ny SLA sy ny tombony azo amin'ny ankapobeny - Novambra 12, 2019
#analysis fampitana injeniera fampitana Engineering fanarahan-dalàna FOR-A, rafitra vitsivitsy, Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor isovideo, viarte, HDR, tabataba fampihenana, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, bitrate fampihenana, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw LogServer Mediaproxy fanaraha-maso OTT Quincy Media SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Arrows fanadihadiana, Digital Nirvana, fanarahamaso ny media, IBC TV Technology Ultra HD Forum Video injeniera	2019-08-14
Previous: AJA Ships KUMO 3232-12G Compact 32 × 32 12G-SDI Router
Next: Fanaraha-maso teo anoloana- Dance Studio